10zọ iri iji bawanye ahịa na 2012 | Martech Zone
Wednesday, February 8, 2012 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Ọ dị mma mgbe niile ịhụ akwụkwọ ozi nke na-akpali ụfọdụ echiche… na nke a na-eme nke ahụ. E nwere ọtụtụ atụmatụ iji mụbaa ahịa n'ebe ahụ mana ndị na-ere ahịa bụ ndị na-arapara na mkpebi nke ụzọ ha ga-esi gbanwee. Adịkarịghị na anyị nwere mma nke ịme ya niile. Ana m agba ndị ahịa ume ịnabata teknụzụ nke na - arị elu - na nke a ma ekwentị mkpanaaka ma akụrụngwa ahịa bụ ụzọ m ga-esi tinye n'ihi uru ahịa ha na arụmọrụ ha.
Ndị ahịa na-abụkarị isi nke azụmaahịa ọ bụla. Agbanyeghị, na 2012, ndị ahịa ga-achọ nlebara anya nkeonwe karịa ka ọ dịbu. O di nwute, ulo oru nwere ike mezuo nke a site na ichota nchịkọta na teknụzụ ọhụrụ ga-enyere ha aka iwulite mmekọrịta na-enweghị atụ na ndị ahịa ha. Nke a bụ ụzọ kachasị Truaxis iji bulie ahịa na afọ ọhụrụ ebe ị na-enye ndị ahịa gị ihe ha chọrọ, mgbe ha chọrọ ya. Site na: Uzo iri iji bawanye ahia na 10
Tags: Analyticsmmekọrịta ndị ahịagamificationakụkụiguzosi ike n'ihe mmemmemetricsMobile na Mbadamba ụrọaha njikwankewana-akpakọrịtaezubere iche mgbasa ozi
Tinye Pinterest Pinit Button na WordPress
Feb 8, 2012 na 7:58 PM
Business nwe kwesịrị biputere ndị a 10 iwu ozugbo na-esote ha ala na gọọmenti etiti ụkpụrụ otú onye ọ bụla nwere ike ịhụ ha kwa ụbọchị… Nice job Douglas !!
Feb 9, 2012 n’elekere 8:31 nke abali
Douglas, Ezigbo ihe omuma. Anọ m na-ezere nchịkọta na metrics mana ịmụtakwu ihe kwa ụbọchị. Daalụ maka ozi zuru ezu nke m nwere ike itinye n'ọrụ nke m na nke onye ahịa m. Jiri obi ụtọ, Susan
Mar 12, 2012 na 2: 00 AM
Nke a bụ nnukwu ndepụta ndị obere azụmaahịa niile kwesịrị ịnwe. Ọ bụ ezie na ihe niile dị na ndepụta ahụ nwere ike ọ gaghị emetụta ụdị azụmahịa ọ bụla, ọtụtụ na-emetụta azụmahịa niile ma ọ bụrụ na agbakwunye usoro mgbakwunye na afọ. Echere m na ihe ndị kachasị elu bụ: mmekọrịta ndị ahịa, nghọta nchịkọta weebụ, ịchebe, ọchụchọ mpaghara, nyocha ahịa na mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ bụrụ na obere azụmaahịa na-elekwasị anya na ndị a, ha nwere ike ịhụ nnata ego bara ụba na njedebe nke afọ ma nwee usoro siri ike ịmalite 2013 na ụkwụ aka nri.
Mobile App Ọkachamara
Sep 12, 2012 na 12: 15 AM
Nke ahụ bụ ndepụta dị egwu maka ọchụnta ego. ọ bụrụ na ha na-agbaso iwu na ụkpụrụ ndị a, onye ọ bụla nwere ike ịhụ ha kwa ụbọchị .Anyị nwere ekele maka ịkekọrịta